Khabiir Taageera Somaliland Oo Ka Digay Halista Ka Dhalan Karta Xilalka Sare Ee Ay Beelaha Isaaq Isku Koobeen | Salaan Media
Khabiir Taageera Somaliland Oo Ka Digay Halista Ka Dhalan Karta Xilalka Sare Ee Ay Beelaha Isaaq Isku Koobeen
23, 2013 Hargaysa(SM) – Mr. Matt Bryden, oo ah khabiir u dhashay dalka Kanada, dhawr goorna ay madaxda dawladda Somaliya ku eedaysay inuu taageero qaddiyadda madaxbanaanida Somaliland, ayaa ka digay halis Somaliland ka soo waajihi karta kuraasida sare ee dalka ee ay isku koobeen beelaha Isaaq oo ka mid ah beelaha dega Somaliland.
Mr. Matt, oo ahaa madaxii hore ee guddiga kormeerka Qaramada Midoobay u qaabilsan Ereteriya iyo Somaliya, ayaa khudbad uu dhawaan ka jeediyay machadka CSIS oo ay xaruntiisu tahay dalka Maraykanka, wuxuu kaga hadlay isbedelada iyo khataraha ka jira wadanka Somaliya, waxaanu qaybo ka mid ah warbixintaas uu machadka ka jeediyay ku soo qaatay dhibaatooyin soo waajihi kara Somaliland. Waxyaabaha uu hoosta ka xariiqay ee Somaliland khuseeya waxa ka mid ah natiijooyinkii doorashooyinkii deegaanka ee u dambeeyay oo sababay dhimasho iyo dhaawac, iyadoo doorashooyinkii ka horeeyay aanay cidna ku dhiman cidna ku dhaawicmin. Isagoo ka hadlaya Mr. Matt, doorashooyinkii u dambeeyay ee deegaanada ee Somaliland ka dhacay wuxuu sheegay inay Somaliland sumcad dunida kaga kasbatay doorashooyinka Dimuqraadiga ah iyo ilaalinta xuquuqal insaanka, waxase uu ka hadlay doorashadii u dambaysay, “Doorashooyinkii deegaanada ee sannadkii 2012 way ka hooseeyeen doorashooyinkii hore, waxay abuureen khilaaf iyagoo markii u horaysay sababay dhimasho, waxaanay dhaawaceen kalsoonidii ay dadku ku qabeen nidaamka doorasho.” Sidaas ayuu yidhi Mr. Matt, oo uu wakhtigan fadhigiisu yahay magaalada Nayrobi ee dalka Kenya oo uu ka aasaasay xarun cilmi baadhiseed oo uu u bixiyay SAHAN. Waxaanu intaas ku daray hadalkiisa, “Doorashooyinkii Baarlamaan oo qorshaysnaa inay qabsoomaan 2010, ayaaba dhaafay wakhtigoodii , doorashada golaha loo yaqaano guurtiduna mabay dhicin.”
Wuxuu sheegay in ismariwaaga ka taagan diiwaangelinta cod bixiyayaashu ay dib u dhac ku keeni karto doorashooyinka madaxtooyada iyo Baarlamaanka, “Khilaafka adag ee ka taagan diwaangelintu wuxuu keeni karaa dib u dhac ku yimaada doorashooyinka Baarlamaanka iyo madaxtooyada [oo wakhtigan u qorshaysan inay qabsoomaan 2015], taas oo khatar gelinaysa nidaamkii dimuqraadiyadeed ee Somaliland.” Ayuu yidhi.
Waxa kale oo uu si weyn uga hadlay kuraasida dalka ugu sareeya oo ay ku fadhiyaan hoggaamiyayaal ka soo jeeda Somaliland, taas oo uu sheegay inaanay dawladihii hore ee Somaliland soo maray ka dhici jirin. “Hoos u dhac ayaa ka muuqda meeqaamkii dawladda Somaliland ee ahaa inay wada metesho qabaa’liada dalka wada degen. Dadka aan Isaaqa ahayni muddo dheer ayay ka soo horjeedeen raadinta madaxbanaanida Somaliland, iyagoo ku doodayay in ajandaha Somaliland uu yahay mid u gaar ah beelaha Isaaq, Dawladihii hore ee Somaliland way diidi karayeen doodan iyagoo tilmaamayay xaqiiqada ah in dhammaan beelaha Somaliland ay ku wada jiraan dhammaan qaybaha kala duwan ee dawladda.”
Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi, “Daahir Rayaale Kaahin oo Somaliland xukumayay sannadkii 2002 ilaa 2010, wuxuu ka soo jeeday Beelaha Gadabuursi. Baarlamaanka, maxkamadda sare, guddiga doorashooyinka iyo Booliska waxa inta badan hoggaamin jiray saraakiil aan Isaaq ahayn. Si kastaba ha ahaate, maanta dhammaan hay’adahan waxa madax ka ah Beelaha Isaaq. Taas oo madmadow gelinaysa sumcadii Somaliland ee ahayd inay tahay Dal ay dimuqraadiyad la wadaagaa ka jirto.”